Koety: Bilaogera notoriana noho ny fitsikerana ny trano fisakafoanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2018 14:59 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Italiano, English
(Marihina fa tamin'ny volana Febroary 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Raha nanoratra ny fitsikerana manokana ny trano fisakafoanana iray vaovao vao nisokatra, izay noheverina ho zavatra mahazatra, ny bilaogera iray, tampoka teo dia lasa resabe an-tserasera izany rehefa nandrahona hitory ilay mpitantana ny trano fisakafoanana. Nanoratra fanadihadiana momba ny Benihana Kuwait, tao amin'ny bilaoginy 248am i Mark Makhoul, bilaogera Libaney mitady ravinahitra any Koety.
Nilaza i Mark fa mandiso fanantenana ny sakafo ary nilazalaza ny haratsiny tamin'ny antsipiriany izy. Nahatezitra an'i , Mike Servo, ilay lehiben'ny trano fisakafoanana tao Koety izany. Naneho hevitra maromaro tao amin'ny bilaogin'i Mark izy ary namoaka fandrahonana ny hitory any amin'ny fitsarana, izay nomena an'i Mark andro vitsy monja taorian'izay (jereo amin'ny teny Arabo sy teny Anglisy ).
Ny Beninhana Kuwait dia tsy nangataka onitra KD5001 (eo amin'ny 18,000$ ) fotsiny ihany noho ny fahavoazana, fa nangataka ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao ao Koety ihany koa izy ireo mba hanakatona ny tranonkala.
Nalaza tao amin'ny Twitter tao Koety ny lohahevitra #BenihanaKUW ary nisy pejy tao amin'ny Facebook mba hanoherana ny fihetsik'izy ireo, toy ny Fanaovana Ankivy ny Benihana Kuwait .
Nihevitra i Ansam, bilaogera avy ao Koety fa tena ratsy ny nandraisan'ny trano fisakafoanana ny toe-draharaha:
Nampalahelo ahy raha tsy maintsy nametraka fitoriana an'i Mark ilay trano fisakafoanana noho ny fanoratana fanadihadihana momba ny trano fisakafoanany izay milaza ny heviny “manokana” sy ny fomba fijeriny “manokana”. Namaky izany aho tamin'io fotoana io, ary namerina namaky azy indray (indroa) androany mba hahalalako izay tena nahatonga azy ireo voalohany hanao izany … TSY ratsy ny mitsotra ny marina!
Nilaza hevitra iray manan-danja i His avy ao amin'ny Hishersq8 :
Ho an'ireo fanadihadiana, any Etazonia na any Angletera, dia misy ny fitsikerana sakafo. Hilaza ny marina izy ireo ary atahoran'ireo trano fisakafoanana sangany. Hitany ny zavatra hitany na tsara na ratsy. Namoaka lahatsoratra i Mark ary niresaka momba ny zavatra hitany. Angamba i Mark no iray amin'ireo bilaogy voalohany ao Koety nefa tsy mihevitra aho fa hanova ny sain'ireo olona miisa 3 tapitrisa tsy handeha any izy. Manana ny zony amin'ny fomba fijeriny izy, toy ny rehetra!
Nanoratra i Abu Jaij, avy any Koety ihany koa hoe:
Mazava ho azy fa tsy iadian-kevitra ny zon'ny olona hametraka fitoriana raha toa ka misy ny fitsikerana mivantana avy amin'ny olona iray na vondron'olona, ​​saingy ny fanenjehana an'i Mark dia tsy mifototra amin'ny fitsipika fototra fotsiny ihany fa tena (mahatohina) ny fiantohana ny zon'olombelona fototra ho an'ny olon-tsotra tsirairay sy ny mpila ravinahitra.
An'olotokana bilaogin'i Mark, afaka maneho ny heviny manokana momba ny zavatra ataony manokana izy, tsy maneho orinasa izay mifaninana amin'ity trano fisakafoanana Japoney ity izy, mitsikera ny trano fisakafoanana ho toy ny fialamboly izy, noho izany tsy azonao lazaina fa nikasa ny hanala baraka ilay trano fisakafoanana.
Araka ny fanarahako ny bilaogin'i Mark no namakiako ny fomba fijeriny ny trano fisakafoanana ho toy ny karazana fialamboly, tsy mpitsikera matihanina izy na mpahandro sakafo iraisam-pirenena, noho izany tsy azoko ekena ho tena marina izay rehetra lazainy .
Manantena aho fa ny tompon'ilay voalaza fa trano fisakafoanana dia hisintona ny fitorian'izy ireo an'i Mark. Ny heviny manokana no nolazainy, na izany marina na diso, ary raha nanaraka ny heviny ny olona maro dia tsy midika izany fa izy no mpitsikera farany sy hany mpitsikera tokana ny trano fisakafoananao.
Raharaham-barotra ao an-toerana avy amin'ny andiana trano fisakafoanana iraisam-pirenena Benihana ilay toeram-pisakafoanana. Niantso ny COO sy ny Filoha Lefitra Mpanatanteraka Benihana ao Tokyo izay nilaza fa tsy nandre momba ilay fitoriana ny bilaogy Amerikana BoingBoing.